Igumbi laBucala kwiNdlu ekwabelwana ngayo -Iziko lesixeko - I-Airbnb
Igumbi laBucala kwiNdlu ekwabelwana ngayo -Iziko lesixeko
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguDana
Phantse iApartment eNtsha enamagumbi okulala ama-3 abekwe entliziyweni yeCanberra kumgangatho we +2 enofikelelo lokunyuswa kunye neethegi zokungena.
Esi sakhiwo sibekwe kwindawo entle enokufikelela ngokulula kwiGlebe Park kunye neTurner parkland kunye neMyuziyam yaseCanberra kunye namaziko okuthenga.
Ijikelezwe ziindawo zokutyela, iinkundla zokutya, kunye neevenkile ezikumgama wokuhamba.
Kukho indawo yokupaka yasimahla esitratweni phambi kweflethi ebusuku, kwaye indawo yokupaka egqunyiweyo yi-$15 ngobusuku (i-99% ikhona; kufuneka ibhukishwe kwangaphambili)
Le ndawo yeyona ndawo isembindini onokuyifumana eCanberra! Iphambi kweZiko lokuThenga (ngaphantsi kweemitha ezingama-30 kude), kumgama wokuhamba ukusuka kwizikhululo zebhasi zedolophu (imizuzu emi-4 ukuhamba), uMurrays kunye neeGrayhound Coaches (abafika bevela eSydney naseMelbourne, imizuzu eyi-8 yokuhamba umgama), ANU (imizuzu eyi-8 ukuhamba. ) kunye nezinye iimyuziyam ezikufutshane. Indlu icoceke kakhulu kwaye yonke ifenitshala ithengwa ngoMatshi ka-2019!
Izimvo eziyi-1 599